Nudgify: Yandisa ukuGuqulwa kweeShopify zaKho ngeQonga eliHlanganisiweyo lobuNtu boLuntu
NgeCawa, Agasti 29, 2021 NgeCawa, Agasti 29, 2021 Douglas Karr
Inkampani yam, Highbridge, inceda inkampani yefashoni ukumilisela isicwangciso sayo ngqo kubathengi ngaphakathi. Kuba bayinkampani yesiko ebonelela abathengisi kuphela, bafuna iqabane elinokuthi libancede babe yingalo yabo yetekhnoloji kwaye ibancede kuyo yonke imiba yophuhliso lwabo lophawu, i-ecommerce, ukuhlawulwa kwentlawulo, ukuthengisa, ukuguqulwa, kunye neenkqubo zokufezekisa. Ngenxa yokuba banomda wee-SKU kwaye abanalo uphawu olwaziwayo, sibatyhalele ukuba baqalise kwiqonga ebelilungile, linokutsha, kwaye
NgoLwesibini, Agasti 24, 2021 NgoLwesibini, Agasti 24, 2021 Douglas Karr
Ndabelane ngendlela endiqokelele ngayo iofisi yam yasekhaya kusasazo ngqo kunye nepodcasting. Iposi lalinolwazi oluneenkcukacha ngezixhobo zekhompyutha endandizihlanganisile… ukusuka edesikeni emileyo, mic, ingalo ye-mic, izixhobo zomsindo, njl. Kungekudala emva koko, bendithetha nomhlobo wam olungileyo uJack Klemeyer, uJohn Maxwell Coach oqinisekisiweyo noJack undixelele ukuba ndifuna ukongeza i-Ecamm Live kwizixhobo zam zesoftware ukuze ndithathe ukusasaza kwam bukhoma inotshi.